Sniper Arena: PvP Army Shooter 1.1.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Sniper Arena: PvP Army Shooter
Sniper Arena: PvP Army Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Sniper! ယင်းနယ်ပယ်တွင် Enter နှင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းကဒီစိတျလှုပျရှားစရာ '' စနိုက်ပါ vs. စနိုက်ပါ '' အတွက် # 1 SHARPSHOOTER ဖြစ်လာ! ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပိုခ 500 Sniper ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်, ဦးဆောင်သူကိုတက်, ဤဝန်ကြီးချုပ်မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံအတွက်စစ်တိုက်ပျော်မွေ့! စင်ကြယ်သော adrenaline အလုအယက်ခံစားခြင်းနှင့်စစ်မြေပြင်၏အပူထဲမှာ lifelike တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ခံစားမှု, သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌လက်ျာ။ လုပ်ဆောင်ချက်သို့ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်ချက်ချင်းစစ်တိုက်ရာတွင်ပူးပေါင်းပြုလုပ် PLAY အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
•ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ 3D graphics ခံစားကြည့်ပါ: တိုင်းနည်းနည်းအသေးစိတ်အတွက် superbly လက်တွေ့နှင့်စစ်မှန်သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Sniper ရိုင်ဖယ်များနှင့်လှပစွာဂိမ်းယုတ္တိဗေဒနှင့်ချိန်ခွင်လျှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒီဇိုင်းစစ်မှန်စနိုက်ပါပစ်ခတ်ရန်ရာထူးနှင့်အတူ4အံ့မခန်းတိုက်ခိုက်ရေးနေရာများတွင်။
•အလိုလိုလွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုကြိုးစားပါ - ကိုပွတ်ဆွဲ, zoom, အညွန့်,3ဂိမ်း Modes သာယှဉ်ပြိုင်: အရှိဆုံးရန်သူများကိုရိုက်အကြင်သူသည်မြေပုံပေါ်တက်နိုင်ဖို့ 8 အစစ်အမှန်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ Deathmatch, ရေးအဖွဲ့ Deathmatch နှင့်ကြီးစိုးမှု, အလှည့်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
•နေ့စဉ်အလုပ်များကိုအမျိုးမျိုးနှင့်အသေးစိတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်, ကလေးစစ်သားတကနေလူအပေါင်းတို့သည်လမ်း Phantom ၏ရာထူးမှ, သင့် Sniper အလုပ်မှာဖြစ်ထွန်းစေပါ။ ခေတ်သစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်: စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်, ခဲယမ်းမီးကျောက်, ပြောက်ကျားနှင့်အထူးပစ္စည်းကိရိယာ။
•သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမဟာမိတ်များနှင့်တစ်ဦးကိုလညျးမတားဆီးကစားသမားဖန်တီး! , ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြသည်အခြားအသင်းများကိုအနိုင်ယူနှင့်ကြီးစိုးမှု mode မှာနယ်မြေများအနိုင်ရ။
ဒီဂိမ်းကစားရန်တည်ငြိမ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းကို real-time ကမ္ဘာအနှံ့ကစားသမားနှင့်အတူအွန်လိုင်းပွဲစဉ် ups, မည်သည့်မိုဘိုင်း device များအတွက်ဝေမျှဆာဗာများနှင့်တိုက်ရိုက်-CHAT ကိုပါဝငျသညျ။
Sniper Arena: PvP Army Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sniper Arena: PvP Army Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sniper Arena: PvP Army Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sniper Arena: PvP Army Shooter အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 158.74k 65.18M
Sniper Arena: PvP Army Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sniper Arena: PvP Army Shooter အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.nordcurrent.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 10:EC:12:26:1C:E3:64:17:2B:B9:B0:75:57:BD:F8:75:4B:3F:0A:34
အဖွဲ့အစည်း (O): Nordcurrent
Sniper Arena: PvP Army Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ